DLULA I-Lufthansa Pack FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 122 MB
Play 76 637
Umbhali: Iprojekthi ye-Airbus neProjekthi ye-OpenSky & Skyspirit & Pack kusuka ku-ricardo_tv
pack Superb kuhlanganise Boeing B737-500, B747-400, B747-800i futhi Airbus A380-841 (zonke nge VC kanye nemisindo) e imibala Lufthansa.
Ekukhethweni kwesigaba se FSX/P3D khetha u- "Lufthansa Pack"
Deutsche Lufthansa AG (FWB: Lha, OTCQX: DLAKY) (pronunciation German: [dɔʏt͡ʃə lʊfthanza]) ifulege othwala Germany kanye le nkampani kunawo wonke eYurophu mayelana abagibeli jikelele amthwala kanye nosayizi yemikhumbi. Uhulumeni German kwadingeka 35.68% esigxotsheni Lufthansa kuze 1997, kodwa le nkampani manje owned by zimali abazimele (88.52%), MGL Gesellschaft für Luftverkehrswerte (10.05%), Deutsche IPosi (1.03%), kanye Deutsche Bank (0.4%) futhi ine abasebenzi 37,042 (njengoba of March 2007). Igama lenkampani lisuselwa Luft (elithi German for "umoya"), futhi Hansa (emva Hanseatic League, a ephakathi yokuhweba iqembu elinamandla).
I lendiza lendiza emhlabeni sesine ngobukhulu mayelana abagibeli jikelele kuyiswe, ezisebenza nezinsiza ukuze 18 izindawo ezifuywayo kanye 203 izindawo international in 78 emazweni e-Afrika yonkana, Americas, e-Asia naseYurophu. Ndawonye nabalingani bayo, amasevisi Lufthansa azungeze 410 izindawo.  With phezu 710 izindiza it has ngobukhulu nomgibeli enkampanini yezindiza yemikhumbi emhlabeni lapho kuhlangene nabasizi babo.
Ihhovisi Lufthansa BakaJehova babhaliswa Indlunkulu ezinkampani ungaphakathi Deutz, Cologne, Germany, kwemisebenzi yayo base main (Lufthansa Aviation Center (LAC) nomthamo primary hub eFrankfurt Airport e Frankfurt am Main nge isikhungo yesibili eMunich Airport. Iningi pilots Lufthansa sika , abasebenzi emhlabathini, futhi indiza Nezikhonzi zisekelwe e Frankfurt.
Lufthansa uyilungu owasungula Star Alliance, izindiza zangakwazi umbimbi esikhulu kunazo zonke emhlabeni, kwakheka 1997. I Lufthansa Group iqasha 117,000 abantu emhlabeni wonke of 146 bezizwe. Ngo 2010, abagibeli abangaphezu kwezigidi ezingu-90 wandizela ne Lufthansa (hhayi kuhlanganise Germanwings kanye Brussels Airlines). Source Wikipedia.
Isiqophi: Lufthansa by Polo91240 for Rikoooo.com
Umqeqeshi weScotland Aviation Bulldog T. MK1 FSX & P3D